Kuparadzwa kwekutengesa kwechiratidzo 'rechts', Trump, Brexit (uye zvose zvakabatana nayo) zvakatanga: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 13 June 2019	• 12 Comments
Mumavhiki mashoma takaona kuparadzwa kwekutarisa kwechinyorwa chakanyatsogadzirwa 'chakarurama'. Chiratidzo ichocho chaifanira kuenzanisirwa nevakanyatsodzidziswa kuchengetedzwa kwemagetsi emakwenzi: kubva kuDonald Trump muUnited States, Marine le Pen muFrance kune Thierry Baudet muNetherlands. Icho chiedza chakanga chiri chekutaridzika kuti kufunga kukuru kuburikidza nevhidhiyo kwakanyadziswa pakuita mano ekufunga uye mune chimwe chinhu chinongoratidzwa nevanhu vane mapiro. Zvadaro chikwangwani chaifanira kutamirwa kune chakanyanyisa kurudyi uye kumunhu wenyika uye kunyange fakist uye zvisingabatsiri kuvakadzi.
Zvechokwadi Donald Trump achiri mutungamiri muUnited States uye zvechokwadi Brexit nzira inoramba ichienderera mberi, asi ndakafanotaura kuti zvose zviri zviviri zvichava kutanga kwekuwa. Trump aifanira kutanga mauto ezvokutengeserana kuitira kuti agadzire anabi mukuru weku (kuswedera) kushaya kwehupfumi hweumambo hukuru hweAmerica. Kukundikana kweBrexit, zvichida kuburikidza ne-no-deal kana kunyange (nzira itsva kupfuura iyo) iyo kwete kubhadhara chikwereti kusvika kuEurope, inofanira kutungamirira kune mari yehupfumi muEU. Izvi zvinofanira kuratidza nyika yose kuti chiratidzo "chakarurama" (uye naizvozvo vatsoropodzi) ndivo vane mhosva yekukundikana uye dambudziko.
Chikonzero chatakaona Donald Trump achidzvinyirira muLondon maire vhiki yapfuura uye chikonzero chaakadana kuti Prince Harry mudzimai weMeghan Markle "chakaipa" ndicho chikonzero chimwe chete chatakaona achiita mudzimai-asingashamisi mashoko uye akabatanidzwa kune zvinonyadzisira actress. Anofanira kuwana chimiro chakanyanyisa, kuitira kuti vanhu vawane zvakanyanyisa-mapofu anonzwa zvakanaka. Ikoko kushorwa kunobva kwabatanidzana nezvose zvakakosha-shingaira (chinonzi 'chakanaka'). Izvo zvose zvinofungidzirwa zvakanaka kutengesa (propaganda).
Iwe unogona kuisa boka iroro kune rimwe-kana-pane-yekare-marashi. Tatove taona chiratidzo chekare. Vhidhiyo iri pasi apa inoratidza kuti kubatana nekodhi iyi yekare yakatoitwa sei. Vhidhiyo inoenda viral paIndaneti uye inonyatsoratidza kuti chinangwa ichi chii. Sangano rinotungamirirwa nevematongerwe enyika uye vezvevhidhiyo vakavimbisa kuti kodzero yacho yakava chiratidzo uye kuti maonero ose akafukidzirwa mafungiro akafanana yakanga yakasungwa. Hazvisiri zvemaonero ako; pfungwa yacho ndeyokuti kana iwe une maonero, iwe unowanzova wekodhi iyo. Uye icho chiratidzo iye zvino chiri kubatanidzwa nhanho nehanho kusvika pane 'brand' yechiratidzo.
Nhema dzinopararira dzinonyanya kuratidza kuti simba rezvemitambo, vezvematongerwe enyika uye zvemagariro evanhu rinoshanda sei. Iyo yunifomu iri muvhidhiyo inomiririra maitiro akajeka aya hinifomu kuenzanirana nemakwikwi ezvakanaka (self-created) kufamba. Icho chinyorwa chinenge chiri pachena chakajeka iyo vhidhiyo iyi inogadzira ndezvakataurwa kumusana wechipiri 25 muvhidhiyo: "Pamwe ini ndiri kunyanya kukodzera kana chii?"(Click on subtitles).
Usasvibiswa kune rimwe boka rezvematongerwe enyika kana kuruboshwe kana kurudyi. Rega kuvhota, usabatanidzwa mumutambo wezvematongerwe enyika wekugadzira marimi. Iwe uchazopedzisira wakasvibiswa kune boka revanhu vanotarisira uye nevaNazi. Saka kufunga kwakakosha kunofanira kubvumidzwa kuva mungozi yekugadzikana uye rugare.
Source chinyorwa listings: nos.nl
Iyo mhando 'kurudyi' uye nenzira yakanyatsorongwa yekushambadzira zano rekunyomba
89 Jarige German Holocaust denier pamusana pokutiza kubva mujeri
Vatongi vechiDutch vakagamuchira muchinjikwa nemaitiro echiNazi here?
Tags: kurangana kufunga, kunwa, Featured, firimu, im, link, brand, nazi, MaNazi, nazikeule, Nazism, zvakarurama, Reich, kushorwa, Video
Stiff akanyora kuti:
13 June 2019 pa 13: 03
Hongu zvose zvakajeka ... donald trump, marie le le penn uye kwekupedzisira nguva yekare fvd yakanga ichirova vaMuslim pa lmfao. Ndinofunga kuti mhinduro yacho inowedzera kutamira kune dzimwe nyika ... uye mushure mekuvhota ... ivo vanoda hondo yehurumende muNL asi nekuda kwekuti vanofanira kugadzirisa kusawirirana, vanokanganisa kodzero yehupfumi, vaMuslim nekugadziriswa nezvimwewo.
Masonic motto akarayira kunze kwemakwikwi .. Iniwo ndine chirevo ... chaos kunze kwezvakawanda uye ndinoziva kuti hapana mutemo unogona kubuda. Vanoda kubatanidzwa kwemasangano ekuchengetedza kushanda sekuputsa kwekuparadzwa kwekutonga, pasina kuputsa ikoko kwaizova mhirizhonga yenguva dzose.
Usavhota uye kungokurudzira kubuda kwevanhu ... kungoudza vanhu kuti mamwe mamiriyoni anokwanisa kuwanikwa.
Iko mushumiri mutsva weSweden zvakare akataura kuti vanogona kutora mu 30 mamiriyoni evanhu vanobva kune dzimwe nyika. Kana ivo vachida chaizvo kuparadza rudzi rwemutsvuku, ivo havangatenderi kumaawa makuru uye vakuchenjererai nemashoko akadaro. Iwe unogona kubudisa pachena zvirongwa zvako zvakawanda lol?
Regai zvinhu zvose zviputike .. ipapo zvitubu zvenyu zvose zvese zvenyukireya zvichaparara, Israel, USA uye nyika yose ichakundwa zvakare .. Israeri ichadzoka zvakare kuChear Age uye ezvo ichava nemaoko asina chinhu. Ingotamba mutambo wacho kurufu kuti uone kana vakatarisa
13 June 2019 pa 13: 38
Great article, zvachose kubvumirana! Pashure pezvose, chimiro cheo chingave chisina kuisa pangozi. Ramba uchifamba, fara kubhadhara mitero, ita izwi rako kure uye kana rakakwanisa iwe unogona kuderedza simba rako rekufungidzira kuti zvishoma. Kufunga kwakajeka kwakaitwa kwauri nevanofamba netsoka vakakwanisa kubudirira purogiramu yekuita ...
13 June 2019 pa 15: 52
13 June 2019 pa 16: 04
oh well the luciferian pyromaniacs dzakapisa nzvimbo dzakawanda dzinotyisa kuti iise munwe wavo gare gare. Kwete kutaura nezvezviuru zvitatu zvezvitsva izvo zvakawedzerwa zvisinganzwisisiki zvisina kunaka kubvira 2008 uye zviri pamabhajiro emabhandi akasiyana-siyana, funga nezve Deutsche Bank
15 June 2019 pa 00: 03
Zvakanaka, maererano naKris kubva kuImF, kune zvimwe zvikonzero zvakare (verenga zvinopisa moto) .. isa ruoko rwako muchipfuva chako (kukohwa) ho asi 😀
17 June 2019 pa 12: 37
ivo vachiri nhanho mberi kwangu 😛 mushure mekubatana kwezvinhu zvose zvakakundikana, iko zvino bhanhire rakaipa ra 50 mabhiriyoni kuisa zvese zvitriyoni zvezvivamo mazviri ... 😀 zvakanaka manyolo
18 June 2019 pa 12: 54
Zvinenge zvichiita basa rinosuruvarisa, iyo yakasiyana zvakasiyana mushure mokutaurira hosanna kubva kumwedzi mishomanana yapfuura.
Hongu Klaas (BIS) Handikugumbusisi nemaoko ako omusango, shoko rokuti ECB uye Draghi harina kupinda mumashoko ake, akanaka masikati
18 June 2019 pa 13: 55
akacheka, akaveurwa uye kuputika, asi maNeanderthal anoramba akagara. Chero bedzi madurodam vanhu vanodiwa
18 June 2019 pa 16: 33
hahaha kuti Klaas, tinoziva kuti ndiani ari kutungamira
11 July 2019 pa 13: 33
13 June 2019 pa 16: 02
Zvakanaka zvaunonyora zvakakwana zvakakwana!
Vanhu vanogona kufunga vachiziva kuti ndiani ane mhosva yeizvi.
kana mwari kana murairo akanyora kuti:
16 June 2019 pa 16: 46
Martin VRIJLAND zvakare anobata misumari nemisoro. Chiratidzo chandakagamuchira zvizere kwemakore uye chandisingagoni kuisa mumashoko zviri nani.
Kubvira pakurangarirwa kwevanhu, kwakave nekukwirira kukuru kwezvishongo zvemhuri. Ngatitenderei kuti serf munhu anogona / angave ane zvishongo zvachose ...
Zvese zvimwe zvinotaurira kazhinji.
Mutambo Mukuru unowedzera zvakajeka kune avo vanotarisira kutarisa:
kutongerwa kuparadzwa kwehupenyu huri kubudirira kuburikidza nehondo yevagari vemo (kuverenga: kutonga kwevanhu), kupiswa (kuverengerwa: yakarongedzwa) nekusazvibata kwevasingazivi maIslam, zvichiita kuti kuve nekudarika kukuru kwezvepfumi kunonzi "kwakarurama" (chii chiri muzita?) AHRIMAN (verenga: Rudolph STEINER), REDEEMER (kureva, catatic / judeo-christianism / imwe yenyika yechitendero) inounza izvo zvinonzi ruponeso, izvo zvichange zvichange zvichisvika kunze kwekusungwa kwemakwai.
Iyi yese mamiriro ezvinhu yakabudirira kushandiswa kwemazana mashoma emakore. Chikamu chakanaka chemitambo, kana iwe ukandibvunza ...
« Iwe unogona kuunza shanduko uye zvisarudzo zvako zvakashata!
The maxim Problem, Reaction, Solution yakatsanangurwa »
Total Visits: 14.674.364
Chinangwa cheChishanu: sei vana muzvikoro vanoremerwa neBDBTI nhema
Sunshine op Chipangamazano wezvematongerwo enyika anofunga kuvaka dzimba dzedzidzo!
Camera 2 op Dzvinyiriro inoitirwa pavana yakakura!
Martin Vrijland op Chipangamazano wezvematongerwo enyika anofunga kuvaka dzimba dzedzidzo!
guppy op Chipangamazano wezvematongerwo enyika anofunga kuvaka dzimba dzedzidzo!